कतारबाट दिपेन्द्रको खुल्ला पत्र : प्रचन्डलाई कमजोर बनाए, केपि ओलिको टाउको काटेर फुटवल खेल्छौं
प्रकाशित मिति : : बुधबार, माघ ३, २०७४
अनेरास्ववियू का आरसी लामिछाने”, यदी तिमिमा मानवता छ र अन्न खान्छौ भने सबै भन्दा पहीला चुरेपहाड पनि नछुनेगरी २ नम्बर प्रदेश बनाऊने तिम्रो दाइ केपि ओलि को टाऊको काटेर फुटबल खेल, त्यसपछी क- कस्को टाऊको को फुटबल खेल्नु पर्छ मिलेर खेलौला होईन भने, तिम्रो टाऊको पनि फलामले बनेको पक्कै होईन, हामिले खेल्न नपरोस !! सस्तो लोकप्रियता को लागी भुक्न बन्द गर ।
केपि ओलि राष्टबादी हो भन्ने भ्रम नछरौ, केपि ओलिको अश्लिराष्टियता को बारेमा क.योगेश भट्टराई लाई सोध्दा हुन्छ, एमाले बिभाजन को बेला लेखेका लेखअहीले पनि ताजा नै छन!! प्रचन्ड लाई अनावश्यक लान्छना लगाऊने र चौतर्फी आक्रमण गरेर देशलाई कमजोर बनाऊन खोजियो भने हाम्रो हातमा पनि दही जमेको छैन ।
देशको प्रधानमन्त्री र आफ्नो नेतृत्व को रक्षा गर्न र तिमिहरू संग प्रतिकारमा ऊत्रन सक्ने क्षमता छ चेतना होस! लामिछाने बास्तबिकता लाई पहिले फर्केर हेर्न सिक अनि नत्र त्यो टाउको काटने हतियार उल्टन पनि सक्छ । तिम्रा दाइ के पि ओलि को बास्तबिकता हेर अनि अरु लाई आरोप को बाटो रोज ।
प्रचण्ड लाई कुनै आछेप लगाउनु भन्दा पहिले सार्हा दुनिया हेर कसैले कान बाट दूध पियको छैन । हैन भने चुप रहने गर ,चिसो हुदा सडक मा आगो जलाएर बस्न छाेडि देउ, लाखौ लाई भ्रम र दुख न देउ त्यो टाउको काटेर फूटबल खेल्न जनता तिम्रै पछाडि पर्लान । पहिले तेरो दाइ लाई हेर सोध अनि सास फेर्ने गर।
Source: मिडिया डबली